Mamwe makiyi ekudzivirira chikafu chekudya kumba | Bezzia
Mamwe makiyi ekudzivirira chikafu chekudya kumba
Maria vazquez | | Cooking
Zvinoenderana nedhata reFAO, muSpanish wese anozvikanda kure 76 kg. chikafu pagore. Iyo data inoratidza zvakare kuti mu40% yedzimba dzinopambadza chikafu chakawanda, chikafu chakawanda chinobikwa kupfuura zvakafanira uye kuti mu23% yeizvi, mukuwedzera, mhuri dzinoziva kuti vanozadza dengu rekutenga nezvigadzirwa zvavasina kudya.
KuBezzia tinotenda kuti matanho matsva, dzidzo uye nzira dzekuziva zvakakosha kudzikisa huwandu uhu. Asi isu tinoziva zvakare maitiro ekuziva iwo ekuchinja maitiro kuita dzivisa chikafu chekudya kumba zviri mumaoko edu. Uye isu tinogona kuzadzisa izvi kana tikateerera kune makiyi atinogovana nhasi.
1 Ronga menyu yako yevhiki nevhiki
2 Nguva dzose enda kunotenga nerondedzero
3 Inochengetedza chikafu chega chega nemazvo
4 Ita zvakanyanya zvikamu zvaunowanzo kurasa
5 Tora mukana wezvasara uye zvasara
Ronga menyu yako yevhiki nevhiki
Wakaneta nekuzvibvunza kuti "nhasi tinodya chii?" Kuronga menyu svondo rega haingori mhinduro yekudzivirira kutambisa nguva kana simba zuva nezuva kupindura uyu mubvunzo, zvakare ikiyi ku dzivisa chikafu chekudya kumba
Vhura firiji yako uye tarisa mufiriji kuitira kuti utore mukana weiyo vhiki rimwe chete mune yekubheka zvese zviri padyo nekuparadza. Wobva wapedzisa menyu yako kusanganisira ese mapoka ezvikafu anodikanwa kuti izvi zvakaenzana. Unogona kuzviita Mugovera wega wega uye enda kunotenga zuva rimwe chetero kuti uenderere mberi nebasa paSvondo uine Batch kubika.
Nguva dzose enda kunotenga nerondedzero
Kuronga menyu yevhiki nevhiki kunoita kuti kutenga kuve nyore. Sei? Nekuti haina kutungamira mukuvandudza. Nemenu yepepa, zviri nyore kugadzira rondedzero yezvose zvatinofanira kutenga uye kuomarara musupamaketi. Iwe unozodzora zvekudya marara uye muhomwe yako. Ehe, yeuka kuti kukanda chikafu zvakare kutambisa mari!
Inochengetedza chikafu chega chega nemazvo
Kunyatso chengeta chikafu mupantry yako, firiji uye furiza ndiyo kiyi yekudzivirira chikafu chekudya. The order inobatsira kurwisa tsvina. Inotanga nekuziva nzvimbo yakanakisa yekuchengeta chikafu chimwe nechimwe uye inogara ichiisa izvo zvigadzirwa zvinopera kare munzvimbo yekutanga nekuti… zvakapinda pamberi ndizvo zvinofanirwa kutanga zvatanga.
Saber kupi kuisa mufiriji miriwo, nyama kana chikafu chatobikwa chinowedzera hupenyu hwesherufu. Isu takagovana newe makore apfuura makiyi acho, Vayeuke!
Tora mukana wefriji, asi zviite nemusoro wako. Rangarira kuti kana iwe ukaomesesa chikafu chiri kuenda chiri kushata, kana iwe uchichikanda icho chichava zvakafanana kana zvakanyanya. Edza kuomisa zvikamu zvega zvega kana zvichienderana nechengeto remhuri zvichidzika uye rangarira kunyora zvese. Tevedza matipi edu matatu kuwedzera kugona kwefriji uye kuchengetedza nguva.
A hari yakanyanyisa kukura kuishandisa isati yaipa? Kune zvimwe zvigadzirwa zvatisingashandise kakawanda asi isu tinoda kuva nazvo: chorizo ​​mhiripiri nyama, matomatisi akanyatsobikwa, nemafuta akasanganiswa ... Haufanire kuzvisiya. Vatenge uye nekukurumidza paunosvika kumba, ugovaparadzanisa muzvikamu uchishandisa echando migomo uye wozoisa chando mumidziyo. Isu takadzidza hunyengeri kuburikidza nekuvhura instagram maakaunzi e hupenyu «Zero Waste» uye takatora zvakawanda kubva mairi.
Ita zvakanyanya zvikamu zvaunowanzo kurasa
Kune zvikamu zvezvisarudzo zvekudya izvo mudzimba zhinji zvinoraswa nehurongwa. Tiri kutaura nezvemabhureki emabroccoli, cauliflower kana mashanga echard. Zvinongedzo zvese izvo zvaunogona kuisa mune kirimu kana muto wemuriwo. Nguva dzose gadzira nzvimbo mune yako yemenyu menyu yeiyo puree yemiriwo, kuti ugone kutora akacheka uye zvasara zvemazuva ekupedzisira.
ari hove misoro nemapfupaZvakare nemapfupa ezvimwe nyama, anokwanisa zvakare kushandiswa kugadzirira maboth aunogona kutora sekutanga kana kushandisa kugadzirira akasiyana akasiyana stew kana masosi.
Tora mukana wezvasara uye zvasara
Kumba kwedu tese takanzwa vanaamai vedu vachidaro "Chikafu hachiraswi". Uye kutozosvikira makore mashoma apfuura, zvaitevedzwa zvakanyanya mudzimba dzedu zhinji. Nhasi ibasa redu kudzoreredza tsika iyi kuti tibatsire kudzivirira chikafu. Kubva ikozvino zvichienda mberi, shandisa kugona kwako kutora mukana wezvose zvidimbu zvekudya uye izvo zvasara kubva pazuva rapfuura. Uye kana usingakwanise kufunga zvekuita nechimwe chinhu, enda kuGoogle wonyora mu "mapikicha ane…." Iwe unozoshamiswa nedzimwe nzira zhinji dzinozoonekwa pamberi pako.
Frutas: Sarudzo yakapusa yekutora michero yakaibva ndeye gadzira smoothies. Iwe unogona zvakare kugadzirira jam dzakagadzirwa kana kuzviisa mune inotapira. KuBezzia takagadzirira zvimwe: Banana Uye Oatmeal Cookies, applesauce, peya pie tatin tutti frutti...
Muriwo: Kirimu, puree yemuriwo kana ratatouilleIdzi inzira huru dzekushandisa iwo iwo miriwo ayo ave kutanga kurasikirwa nekusimba, asiwo kune vamwe awakashandisa sekushongedza uye akatobikwa.
Muriwo: Nyemba dzinochengeta mufriji kwemazuva matatu. Asi kana iwe uchida kuzvidya neimwe nzira, dura rekare nderekuvaita iwo puree. Vabatanidze pamwe nemimwe miriwo uye iwe uchave uine yakakwana kwazvo puree.
Hove nenyama: Iwe unogona kushandisa zvakasara zvakaputsika kugadzirira macroquettes kana madhingi, asi zvakare ku sanganisa mhiripiri kana kugadzira omelette. Sarudzo dzakawanda.
Chingwa: Iyo yakajairwa yakanaka ndeye kutora mukana weiyo stale chingwa kugadzirira mbiriso yemangwanani kana kugadzirira echinyakare madhishi senge garlic soups, Castilian muto, the salmorejo kana Extremadura mafufu. Inogona zvakare kuve chinhu chikuru mumidziyo yekuita dhizeti. Inoshanda kune zvese!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Cooking » Mamwe makiyi ekudzivirira chikafu chekudya kumba
Tsvaga zvakanakira oregano mafuta
Stylish sinks kuwedzera wega kubata kukicheni yako